Israely: Noraisina tamin-kafanampo ny rindrin’ny hatsiaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2009 7:40 GMT
Noraisin’ireo mponina tamin-kafaliana aok’izany ny rotsa-panala sy ny ranomandry izay nampangatsiatsiaka an’Israely tamin’ity herinandro ity. Kely sisa dia ho tapitra ny vanim-potoanan’ny orana, maro ireo matahotra fa ho tafiditra ao anatin’ny haitany mahatsiravina noho ny rotsak’orana kely dia kelin’ity taona ity ny vanim-potoanan’ny fararano.
Orana mirotsaka eo amin’ny Western Wall (rindrina tandrefana) (natao mba hanomezan-danja 90 ho an’ny Green Prophet (mpaminany maitso))
Manoratra i Ilana Teitelbaum avy ao amin’ny Green Prephet:
“Na dia hoe diboky ny hafaliana tokoa aza izahay tamin’ny feon’ny rotsak’orana mifafy/mandona ireo varavarankely, dia mbola mimenomenona be ihany etsy andaniny, manao hoe: “Tena tsy ampy e. tena ampy mihintsy”
Maneho hafaliana omba-pitiavana I Litvshe, ao amin’ny the Muqata;
Rotsa-dranomandry ao Beit El (natao ho an’I Yishai Fleisher)
Tamin’ny farany! Tonga to Beit-El ihany ‘lahy ny rotsa-dranomandry (la neige)!!! Tao aorian’ny volana maro niandrasana azy, dia tonga ihany ity ilay rotsa-dranomandry (la neige)nandrasana.
Nandefa sary anterineto ny sarin’ireo ranomandry tao amin’ny Tany Masina ao amin’ny kumah I Yaishai Fleisher, tafiditra an-tsary tao anatin’izany ny tontolo manodidinan’ny tendrombohitr’I Beit El.
Nomarihin’I Dion Nissenbaum ao amin’ny Checkpoint Jerusalem fa voafidin’ny tompon’andraikitry ny fitantanan-drano ilay vehivavy tsara bika Isarelianina antsoina hoe Bar Rafaeli mba hampianatra ny vahoaka ny fomba fitehirizana ny rano. Hanantona olo-malaza hafa I Rafaeli izany dia tafiditra ao anatin’ny ezaka hisintonana ny fahamailon’ny firenena manoloana ny krizy.
Faritra aiza eo amin’ny ady izany??? niditra tao anatin’ny hetsika I Benji Lovitt, mpilalao hatsikana ikoizana ao amin’ny tontolon’ny famahanam-bolongana Israelianina. Nony hita fa hoe voatsikilo nandritra ny fifidianana ny tranok’alan’ny antoko politika Kadima, dia nanao vazivazyI Lovitt:
Tranok’ala Kadima voatsikilo (natao ho an’I Benji Lovitt)
F’inona no mahazo ireto mpitam-pitaovam-piadiana romotra e? Amim-pahatsorana tokoa fa, tsy haiko mihintsy hoe ataony inona moa ireto basy mba tsy hiantsoako azy hoe mpampihorohoro izy. Mety ho basy rano kosa angaha, izay heverina fa ho heloka GOAVANA ihany eto anatrehan’ny haitany mahatsiravina.
Ankoatr’izany, manana olana lehibe I Matt Beynon Rees momba ny rohirohy ara-jeopolitika (geopolitique)n’ny tsy fahampian’ny rano. Tsindrin’I Rees fa ny tsy fahampian’ny rano eny amin’ny faritra dia atahorana manoloana ny fandriampahalemana efa marin-toetran’I Israely sy ny mpiray tanana. Rehefa avy tsapa fa fahasimbana goavana no azo avy amin’ny hetsika nentina ho an’ity ririnina ity, dia zara fa mandeha ihany koa ny fantson-drano maloto ao Gaza. Eny amin’ny faritra avaratra, dia efa miditra amin’ny taona fahadimy eo amin’ny tsy fisian’ny rotsak’orana I Syria. Mitady amim-pahakiviana ny fanampiana iraisam-pirenena ireto firenena roa tonta mba entin’izy ireo hivonona ao anatin’ny halavan’ny fararano karakaina. Mahatsikaritra I Rees:
Ity no zana-pandaharana mampalahelo farany eo amin'ireo azo lazaina fa ny tena krizy misy ao Proche Orient— ny tsy fisian'ny rano matetika mitarika tafiotra… Efa nampitandrina ihany ny sampan-draharaha nandritra ny taona fa ny ady ao Proche Orient dia ho ady amin'y rano fa tsy ho ady tany intsony… Angamba ny tany hay tokoa moa tsy natao hamelam-bonikazo.
Lahatsoratra manandanja –
· Naharatsy ny gidragidra misy ao Proche Orient ny tsy fahampian’ny rotsa’orana nandritra ny andro ririnina, ny fahavoazana mafin’ny Zaridainan’ny Edena (The Green Prophet)